असारे चटारो, बजेट सक्ने हतारो
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना असार विकासे काम भइरहेको छ । नगरभित्रका केही वडाहरूमा केही नभएको सडकको पिचमाथि पुनः अर्को पिच गरिएको छ भने कहीं असारे झरी पर्दा पनि बजेट सक्ने हतार भए पछि पिच गर्ने चटारो भएकाे हाेे ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ४ को जेपी स्कुल रोड कालोपत्रे भएको करिव तीन बर्ष भयो । उक्त सडक अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ । केही पनि बिग्रे भत्केको छैन । तर त्यही सडकमा बजेट सक्नकाे लागी पुनः पिच गरिएको छ ।
सुर्खेत जुम्ला सडकको भुवनेश्वरी आयल स्टोरदेखि जेपी स्कुल रोडसम्मको सडक पुनः कालोपत्रे गरिएको छ । जेपी स्कुल सम्मको करिव तीन सय मिटर सडक अझै पनि जस्ताको तस्तै छ । कुनै ठाउँमा बिग्रे भत्केको छैन । त्यही नजिकको आयूर्वेद औषधालय जोड्ने सडकभने जीर्ण छ । तर नजिकैको पिचमाथि अर्को पिच गरेर बजेट सिध्याइने चटाराे भएकाे छ ।
वडा नं. ४ बासिन्दा केही नभएको सडकमा पुनः पिच गर्नुभन्दा बरु अर्को विग्रेको सडकमा मर्मत गर्न आग्रह गर्दापनि वडा पालिकाले नटेरेको बताउँछन् । पहुँच र पावरको भरमा केही नभएको सडकमा पुनः कालोपत्रे गरिएको भन्दै वडावासी टुलटुल हेरेर बस्न बाध्य भएका छन् ।
यसैगरी वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रभित्रका जीर्ण सडकहरू पनि धमाधम बजेट सिध्याइने हतारमा टालटुल पारिएको छ । असारे चटारोमा पनि रुझेर कालोपत्रे गरिएको छ । लक्ष्मी चलचित्र हुँदै हटिया जोड्ने करिव २०० मिटर सडक असारे झरीमा रुझेर कालोपत्रे गरिएको थियो ।
पानीमा पनि कालोपत्रे गर्न लागेपछि स्थानीयले आक्रोश पोखेर काम रोक्न पुगेका थिए । स्थानीय पदमबहादुर शाहीले पानीमा रुझेर कालोपत्रे नगर्न माग गर्दा नटेरेपछि अरु स्थानीय लागेर काम रोक्नुभएको थियो ।
पानीमा कालोपत्रे गर्नुको कुनै अर्थ नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ । जीर्ण भएको सडक झरीमा पुनः टालटुल गर्दा अर्को बर्ष फेरि उस्तै हुने भन्दै उहाँले असारे विकास दिगो नभएको जनाउनुहुन्छ ।
यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अहिले नगरभित्रका केही सडकहरु मर्मत गर्ने काम भइरहेको बताउँछ । नगरपालिकाको अनुगमन समितिका सदस्य मोतीप्रसाद कँडेलले अनुगमनका क्रममा कुनै ठाउँमा अस्वभाविक भएको पाइएको बताउनुहुन्छ ।
वडा नं. ४ को केही नबिग्रेको सडकमा पुनः कालोपत्रे गर्न आवश्यकता नभएको भन्दै उहाँले बरु अर्को विग्रेको सडक मर्मत हुनसक्ने भन्नु भयो । उहाँले सडक अनुगमन गर्दा केही भएको पाएपछि त्यहाँबाट वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रका साना जीर्ण सडक मर्मत गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । करिव ७० लाखको बजेटमा बजार क्षेत्रभित्रका साना करिव आधा दर्जन जीर्ण सडकहरु ससारे बजेटमा टालटुल पार्न लागिएको छ ।
उता नगरभित्रका ठूला सडकहरुको अवस्था भने दयनीय छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय जाने सडक, बसपार्क जाने सडक, प्रदेश अस्पताल जाने सडक, प्रदेश मन्त्रालय जाने सडक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय जाने सडक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाने सडकहरु भत्केर ग्राभेलजस्तै भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले मर्मत गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति हुनसकेको छैन । विमानस्थल जोड्ने सडकको काम निर्माणाधीन भए पनि काम सकिएको छैन् । सडकभरी भएका खाल्डाखुल्डीले बर्षा याममा पानी भरिँदा जलमग्न हुने गरेका छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सबैभन्दा पहिला सडक सुधार गर्नुपर्ने आवाज नागरिकले उठाएपनि सुनुवाई हुनसकेको छैन् ।